Ahoana no hiarovana amin'ny Coronavirus? | RayHaber | raillynews
HomeANKAPOBENYAhoana no hiarovana amin'ny Coronavirus?
Ahoana no hiarovana amin'ny coronavirus
Tsy misy ny fanafody naseho fa mahomby amin'ny coronaviruses ankehitriny. Noho izany antony izany, ny fitsaboana dia omena ny marary hampihenana ny fitarainan'izy ireo sy hanohanana ny fiasan'ny taova malemy, raha misy izany. Ny olona izay nitsidika manokana na nitsidika an'i Shina tato anatin'ny 14 andro lasa teto amin'ny firenentsika dia tokony hifandray akaiky amin'ny toeram-pitsaboana akaiky indrindra raha toa ka misy soritr'aretina toy ny tazo, kohaka, ary aretina taovam-pisefoana.
INDRINDRA INDRINDRA NY FIVAVAHANA ANY?
Coronavirus dia azo ampitaina amin'ny marary voan'ny coronavirus rehefa manatona mihoatra ny metatra isika. Ny olona marary dia tsy tokony ho manatona haingana kokoa. Mba hisorohana izany dia ny marary tsy tokony hivoaka eny amin'ny fiaraha-monina araka izay tratra, fa tokony hanao saron-tava izy ireo raha tsy maintsy miala.
Fandraisana tanana sy famihina be loatra tokony hialàna.
FANDAHARANA AZY ARY ATAO AN-TRANO TSY MISY AZONAO
Rehefa mikohaka na mihetsiketsika isika, raha tsy kitapom-tanana miaraka amintsika, dia tokony hikosoka na hikohaka ny sandrintsika. Fomba fiarovana izany tsy ho an'ny coronavirus ihany, fa ho an'ny hatsiaka sy gripa hafa koa.
Tena zava-dehibe ny fahadiovana tànana. Tokony hanasa tànana isika raha vao tafaverina avy any ivelany isika. Miaraka amin'ny savony sy rano betsaka araka izay azo atao dia ilaina ny manasa eo anelanelan'ny rantsantanana, ny faritra ambony amin'ny tanana, ny palmie ary avy eo maina. Tsy mandeha amin'ny rano fotsiny io.
Tsy maintsy manana sanitera tanana izahay tsy mila rano mandritra ny andro. Ilaina ny fampiasana disinfectants rehefa vita ny asantsika rehefa miantsena eny an-tsena rehefa mandeha amin'ny metro, bus.
FAMPISEHOANA ANY AN-TRANO PUBLIKA
Tokony hivezivezy matetika matetika izany.
Tokony handinika ny fanadiovana ny tany. Raha voafafa in-2 isan'andro, dia tokony ho avo roa heny io isa io. Mankany amin'ny trano ity.
Tokony hasaina amin'ireto toerana ireto ny saniteran-tanana.
AOKA HANOHANA NY HOSPITAL IZAO
Ho fanampin'ny soritr'aretin'ny gripa sy gripa, ny tanora tsy misy aretina dia tokony hanontany amin'ny dokotera rehefa avy sempotra izy ireo.
Ireo izay voan'ny kansera, aretin'ny voa, famindrana fo, ary ireo manafoana ny hery fiarovana, dia tokony handeha any amin'ny hopitaly avy hatrany, na dia misy soritr'aretina mahazatra aza.
FIVORIANA HO AN’NY FONTOLO MASINA
Nanazava izy fa tsy mila manao saron-tava ho an'ny tsy marary ny minisiteran'ny fahasalamana. Voalaza fa ny fanaovana saron-tava dia mitarika ho amin'ny "fahatsapana fiarovana diso". Rehefa manao saron-tava izy dia mitranga ny fahatsapan'ny 'ok voaro aho'. Ireo marary dia asaina hanao saron-tava. Zava-dehibe kokoa ho an'ny tsy marary ny mandray fepetra ilaina izay raisintsika alohan'ny hanaovana ny saron-tava.
Ahoana no fiasan'ny fiara fitaterana?
Snowstorm tany Uludag
Ny tselatra dia manakana ny fandroahana ao Uludag
Fomba hisorohana ny loza any amin'ny Centre Ski Centre Uludağ
Ahoana ny fiantraikan'ny Tetikasa Marmaray amin'ny fitaterana sambo
Ahoana ny fomba hanaovana kodiarana fiarandalamby
Iza no hanao an'i Ankara Metros?
Ahoana no hahatongavan'ny olona manana fahasembanana any Altunizade Metrobus Station?
Iza no Mpanamboatra Mechanic?
Ahoana no hamahana ny olana amin'ny fitaterana any Bursa?